Edito Mahagaga sy maha lasa… saina
Andrasana anio ny isan’ireo « te » ho filoham-pirenena nanatitra ny dosie ahafahany mirotsaka ho kandida.
Taratra io, indrindra aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana toa an’i Madagasikara. Toy ny hampisambadidahana ny vaovao aely amin’ny vahoaka ka tsy fantatra intsony izay tena marina sy ny lalao maloto fonosin’ny fihetsika sy fanambarana politika ataon’ny mpitondra. Minisitra iray mihitsy izao no nisongadina tato ho ato fa toy ny minia miteniteny foana mandrakariva isaky ny mipoitra amin’ny haino aman-jery. Teo ihany ny hoe tonga dia milaza tsy an-kiera any an-tanin’olona ny “tsiambaratelom-pirenena” fa tonga eto an-tanindrazana koa dia mbola tsy laizina ihany ny totohondry vava. Lazaina fa tokony hanaja ny fiandrianam-pirenentsika ny olona ary tsy hitsabaka ny raharaham-pirenena eto. Toy ny milaza izany hoe azo baikona ny fitondrana ankehitriny kanefa naninona ary no avy hatrany dia novohana ireo vavahadin’ny orinasa AAA taorian’ny fanambaran’ny amerikanina ? Raha tsy noho ny henamaso tamin’ireo vahiny dia tsy noraharahiana mihitsy ireo fianakaviana Malagasy an’arivony velomin’ity orinasa ity fa dia naleo nifikitra tamin’ny kajy maloto mikapa ranjo kandida atahorana sy mamono vahoaka ihany.